Mpikarama An’ady Avy Ao Mali Mikonokonina Korontana ao Côte d’Ivoire? · Global Voices teny Malagasy
Mpikarama An'ady Avy Ao Mali Mikonokonina Korontana ao Côte d'Ivoire?	Voadika ny 25 Oktobra 2012 15:27 GMT
Zarao: UNOCI manatontosa Hetsika fanafoanana fitaovam-piadiana ao Abidjan, Côte d'Ivoire – Febroary 2012. Avy amin'ny Firenena Mikambana ny Sary (CC BY-NC-ND 2.0)
Araka ny tatitra mampifanditra notontosain'ny Firenena Mikambana, nanakarama Islamista avy ao Avaratr'i Mali ny filoham-pirenena Ivoiriana teo aloha Laurent Gbabo mba hanakorontana ny governemanta ankehitriny tarihin'ny filoha Alassane Ouattara.
Nivoka tamin'ny Asabotsy 6 Oktobra 2012 teo ny vaovao tao amin'ny Onjam-peo Radio France International (RFI). Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Côte d'Ivoire: UN report rich in revelations (Famoaham-baovao lehibe avy amin'ny Firenena Mikambana)” nilazalaza momba ny fifandraisana voalaza fa misy eo amin'ny Antoko Ivoiriana Tia Tanindrazana mpanohana an'i Gbabo (FPI) sy ny Islamista Ansar Dine ao Mali ny RFI [fr]. Nilaza ihany koa ny tati-baovao fa nisy ny fivoriana natao tao amin'ny sisintanin'i Maoritania sy Senegaly mba hiresahana momba ny fanentanana ireo mpikarama an'ady.
Marina ve sa fampielezan-kevitra fotsiny?
Gazetim-paritra Frantsay Le Figaro namoaka ilay vaovao nalefan'ny RFI [fr], izay narahin'ny Associated Press ihany koa avy eo, ka nivoaka indray tao amin'ny gazety New York Times sy tranokalam-baovao iraisam-pirenena hafa.
Nandritra izany, nanipika ny mpitondra tenin'ny Firenena Mikambana ao Cote d'IVoire (UNOCI) fa tsy voatery avy amin'ny Firenena Mikambana ny vaovao [fr]:
Mifanohitra amin'ny vaovao voalazan'ny RFI izay niteraka disadisa, tsy tatitra avy amin'ny Firenena Mikambana izany, fa tatitra avy amin'ny manam-pahaizana tsy miankina izay tokony alefa ao amin'ny Filankevi-piarovana.
(…) ireo manam-pahaizana no tompon'antoka amin'izany vaovao izany.
Samy miandry ny fivoahan'ny tatitra ny tsirairay ary hijery ny porofo notaterin'ireo manam-pahaizana mba ahafahana mijery raha marina ny zavatra voalaza ary inona ny porofo hoentin'ireo manam-pahaizana.
Iraka avy amin'ny Filankevi-piarovana ao amin'ny Firenena Mikambana ireo manam-pahaizana tsy miankina dimy ary notendren’ ny Sekretera Jeneraly tamin'ny volana Jiona 2012.
Théophile Kouamouo, bilaogera malaza sy lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety mpanohana an'i Gbagbo ao Cote d'Ivoire “Nouveau Courrier” misalasala [fr] ny amin'ny fahamarinan'ny fanadihadiana notontosain'ireo manam-pahaizana avy ao amin'ny Firenena Mikambana:
Alohan'ny amoahana ilay tatitra, tokony hifototra amin'ny loharanom-baovao voamarina na farafaharatsiny avy amin'ny loharanom-baovao roa tsy miankina ireo manam-pahaizana. Raha azo dia tokony hanontany ireo voakasika ihany koa izy ary hanangona izay zavatra lazainy. Tsy nisy anefa ny fanaovana izany, araka ny nambaran'ireo olona marobe nohadihadian'ny gazety New Courier. Ohatra, mikasika ny fivoriana voalaza fa natao tao Takoradi (Ghana), afaka manaporofo mora foana i Marcel Gossio fa tsy tao Ghana izy tamin'ny daty voalaza.
Miteraka fisalasalana hatrany ny mikasika ny fahamarinan'ny vaovao, nihevitra i Kouamouo fa tokony nomen'ny fitondrana Ivoiriana ireo manam-pahaizana notendren'ny Firenena Mikambana ilay finday nisy hafatra nifanaovan'ny mpitsoam-ponenana FPI sy ny Islamista :
Fanampin'izany, araka ny voalazan'ny RFI, nahitana SMS tratra nifanaovana ny tatitra (?) ho toy ny porofo manohitra ny mpanohana an'i Gbagbo. Na dia izany aza, tsy nahitana manam-pahaizana momba ny fihainoana resaka an-taroby ny vaomieran'ireo manam-pahaizana, ary toy izany koa ny ao amin'ny UNOCI. Mety toy izao ny tena zava-misy, ankoatran'izao hetsika fampielezan-kevitra voakarakara tsara izao, mety avy amin'ny “securocraty”n'ny fitondrana Ouattara ireo lazaina fa “porofo” ho an'ireo manam-pahaizana.
Vatsian'ny International Security Network (ISN) ity lahatsoratra (teny anglisy) ity sy ny dikantsorany amin'ny teny frantsay, arabo ary espaniola ho fiaraha-miasa amoahana ny feon'olo-tsotra eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny filaminana ankapobeny. Tao amin’ny bilaogy ISN,no navoaka voalohany ny lahatsoratra ary azona jerena eto ireo tantara hafa mifandraika amin’izany.
Tantaran'ny Cote d'Ivoire farany 03 Jolay 2015Afrika MaintyFanadihadiana “Mainty Loatra Raha Frantsay” Te-Hahitsy Toraka Amin'ny Resaka Volonkoditra Ao Frantsa
21 Avrily 2015Afrika MaintyAfrikana No Lalao Voalohany Nihanaka Be Indrindra: Ny Fomba Nielezan'ny Lalao Nentin-drazana Hanenika Ny Tontolo
23 Febroary 2015Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaVoampanga Ho Nanararaotra Ireo Mpifindra Monina AFrika Atsimon'i Sahara Ny Mpitandro ny Filaminana Maraokanina
Vakio amin'ny teny Español, Français, عربي, English
Ady & FifandiranaFifandraisana iraisam-pirenenaMediam-bahoakaPolitika